Tababar loogu soo xirayay qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyed. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 21 August 2015 22 August 2015
Munaasabadaan tababarka loogu soo xirayay qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska oo la qorsheynayo in loo wareejiyo goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab ayaa waxaa ka qeyb galay,
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Amniga Gudaha Daa’uud Cabdikarim Shiikh Cumar, Ku-simaha Taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka.
Tababarkan oo la furay 5-tii August ee bishan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaarada amiga gudaha iyo taliska ciidanka booliska, kaasi oo intii uu socday saraakiisha lagu barayay habdhaqanka wanaaagsan iyo xiriirka ka dhexeeya ciidanka booliska iyo shacabka iyo kuwa kale.
Ku-simaha Taliyaha ahna taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo xaflada hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in boolisku uu yahay saaxiibka bulshada, isla markaana saraakiisha looga fadhiyo sidii ay arrintaasi u xoojin lahaayeen.
“Tababarkan idin soo bilowday shantii bishan runtii wax badan ayaad ku barateen oo ay ka midtahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, habdhaqanka wanaagsan, ka difaacidda cadowga shacabka ku dhex dhuumaaleysanaya” ayuu yiri Ku-simaha taliyaha.
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Amniga Gudaha Daa’uud Cabdikariim Shiikh Cumar oo soo xiray tababarka ayaa sheegay in saraakiishan looga fadhiyo in ay xoogga saaraan amniga deegaanada la geyn doono oo ay shacabka ka ilaaliyaan cadowga Al-Shabaab.
“Tababarka aad qaadateen waxaa la rabaa in aad ugu adeegtaan bulshada, oo aad xoojisaan wada shaqeynta shacabka iyo ciidanka, si aad uga heshaan xog badan oo ku saabsan dhagar qabayaasha Al-Shabaab” ayuu yiri Wasiiru-dowlaha amniga gudaha.
Taliska ciidanka booliska ayaa qorsheynaya in ciidamado boolis oo amniga suga la gaarsiiyo goobaha dhawaan lagala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab, si ciidamada ay u soo celiyaan amniga iyo xasiloonida deegaannada laga xoreeyay Al-Shabaab, iyadoo shahaado sharaf la guddoonsiiyay saraakiishii tababarka loo soo xiray.
Maamulka Jubba oo sheegay in ay qancinayaan dadka dhaliilsan